Nicole Kidman buru ụzọ kwuo banyere asịrị banyere nne ya nke ise
Nicole Kidman enweghị ike ịhapụ Ụgwọ Golden Globe Akara, ịbụ onye nomine na otu n'ime edemede. N'ebe a na-acha uhie uhie, onye omekorita ya na di ya bu Keith Urban, ya na ndi oru nta akuko wee zaa okwu banyere imeta nwa nke ise.
Nicole Kidman dị afọ 49, bụ onye na-enweghị ike inweta Golden Globe na ụdị "Onye Nkiri Na-akwado Nkwado" maka ihe nkiri ahụ bụ "Leo", pụtara na nnukwu ihe omume nke mechara na Sunday, na uwe mgbochi mara mma site na nchịkọta nke oge opupu ihe ubi Alexander McQueen. A na-eji ejiji na-eji ejiji na-eji ejiji na-eji ejiji na-eji aka na-eji ya eme ihe.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ndị nkatọ tụlere arụmụka ejiji nke Kidman n'ihi uwe aka na-enweghị ike ịghọta ya, ya onwe ya nwere obi ụtọ ma na-enwu ọnụ mgbe niile, na-ele anya di ya anya, bụ onye yiri ezigbo dandy na omenala ọdịnala na eriri ụta ojii.
Nicole Kidman na Keith Urban
Nicole na-agbaga na foto foto nke onyinye ahụ ma ghara ileghara ajụjụ banyere ọbịbịa dị nso na ezinụlọ ha, nke malitere na ngwụsị December. Kidman kwuru na ọ dịghị eche na ọ dị mkpa inwe ụmụ, na-asị:
"Mba, achọghị m ịmụ nwa ọzọ. M ga-eji obi ụtọ gbanwee echiche a dị mma ma ọ bụrụ na achọrọ m inwekwu ụmụaka. Ma ezuru m na m bụ ugbu a. Di m kwuru n'ụzọ ziri ezi na anyị kwesịrị ịṅụrị ọṅụ n'ihe anyị nwere. "
Jennifer Lopez na enyi ya nwanyị, mama m na nwanne nwanyị n'oge mgbakọ oge 100 Gala
Nne umuaka iri ndi mere ka umuaka ha di ndu
Cheta na na njedebe nke afọ gara aga, mgbasa ozi nke Ebe Ọdịda Anyanwụ, na-ezo aka na ndị na-agba afa, kọọrọ ndị kpakpando ahụ, na-ebulite ụmụ nwanyị abụọ (ndị omempụ nwekwara ndị okenye abụọ), na-achọ ịmụta nwa nwoke si India ma na-akwadebe akwụkwọ dị mkpa maka usoro ahụ.
Emma Stone sonyere n'òtù ndị a ma ama, ndị a kpọrọ òkù izute ndị nkịtị
Tom Cruise dị njikere ịdina n'okpuru mma nke dọkịta dọkịta plastik!
Eva Longoria nwetara kpakpando na Walk of Fame: di ya na ndị enyi ya bịara ịkele ya na nke a
Onye nkiri Hollywood chọrọ igosi onye ndú nke ụwa proletariat!
O siri ike ịmara: Katy Perry na-eme ka ịchọ mma na-atụ egwu paparazzi
Sarah Jessica Parker chọpụtara talent nke ndị na-akwa akwa na ndị na-emepụta ihe
Brad Pitt ga - ejide Angelina Jolie maka mkpe ụmụaka
Justin Theroux, Keith Blanchett, Katy Perry na kpakpando ndị ọzọ na-ese foto "Ụkpụrụ"
Ga 2016 ghọọ Oscar maka Leonardo DiCaprio?
Marie Fredriksson, onye na-abụ onyeisi ndị egwú Roxette, na-ahapụ ebe ahụ
Mgbe ya na Jamie Mazur gawara, Alessandra Ambrosio pụtara n'ihu ọha na enyi nwoke ọhụrụ
Prince William zọpụtara nwanyị ahụ n'ụbọchị ọrụ ikpeazụ dịka pilot helikopta
Photoreport si na-ese "Thor: Ragnarok" si Brisbane
Ofe na multivariate - 9 kacha mma Ezi ntụziaka maka a tọrọ ụtọ mbụ N'ezie
Ebe obibi ndụ oge ochie - echiche ọhụrụ maka ịmepụta onye na-arụ ọrụ nke ọma
Gini mere onyeisi oche ji rigo?
Esi mee chocolate icing?
Desserts na oven microwave
Nkeji nke Cesarean
Uwe ụmụaka maka Afọ Ọhụrụ
Jim Carrey na-achọ ka ụlọikpe ahụ kpochapụ ebubo ọnwụ nke Katriona White
25 foto banyere nwamba na-enweghị ike na-enweghị snow
Kedu ihe iji mee n'ala n'elu mbara ihu?
Nri maka ụkọ ọnwụ
Ngwa ndị na-asacha na ntinye ntaneti - kedu ka ị ga-esi mehie ụzọ?
Ịhụnanya ma ọ bụ ọbụbụenyi: Kate Winslet gwara Leonardo DiCaprio banyere "akwụkwọ akụkọ" ahụ!
Kedu otu esi ekpebi appendicitis na nwa?
Ntutu isi na-eme ngwa ngwa
Ụlọ Ahịa Zoological
Kedu ka esi esi na modulu mee ihe?